Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 18ffaa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooQabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 18ffaa
Berhanu Hundee, Caamsaa 31, 2018
17. Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa Kudhatorbaffaa
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? - Kutaa Sadaffaa
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajji 1, 2018